Maajo – Blast Off to Kindergarten
Maalin kasta ilmahaaga la hadal oo la cayaar. Ilmahaaga had iyo jeer hab sii oo dhabarka dharbaaxo gacal cun ah ku dhiirrigali. U sheeg ilmahaaga in dugsiga ay imaadaan caruur kale ee tira badan iyo dad waaweyn oo meeshaa ay ku wada xiriir doonaan.
Ilmahaaga weydii wayaalaha malintaa ku soo siyaaday iyo in aad ayada kuu sheegto waxa maalinkaa dhacay. Ka dhigo wakhti aad la qaadanaysid ilmahaaga uu yahay mid qaddarin leh. Wadaaga buug ama hees aad labadiinuba jeceshihiin. Wakhti qaadashadaan qaddarinta leh sii wada kaddib marka ay ilmhaaga bilaawdo dugsiga barbaarinta.
Ku dhirriigalinta ilmahaaga waxa ay iyada siinaayaan isku kalsooni awood u siinaysa in hawlo kala duwan ku kala qabsato. Caruurta ku kalsoon awooddooda waxqabsiga waxa ay u badanayihiin in ay isku dayaan qabsashada waxyaabo adag oo cusub. Ilmahaaga kala hadal waxa ay ayada ku hanweyntahay – qorshe ama xirfad. Weydiso ayada in ay jiraan wax ay barashadooda ama samaytooda aad u adkayd. Sida uu daremkeeda noqday marka ay wixii ku guulasatay?
U hambalyay ilmahaaga marka ay howsha si fiican u qabto. Si tifatiran xoogsaar sida hawsha laga rabayloo qabanayo oo aan la eegin dhammeystirka: “Maryaney, aad baan u jeclestay sida wanaagsan ee aad walaasha ula wadaagtya qalabka lagu cayaaro. Qof kasta ee reerkaaga maalin kasta ha dhammaystirto weedhan. “Waxa aan ku hanweynahay_______ waxa aan ________.” Iyo “Waxa isla hanweynahay waxa aan sameyay….”
Ilmahaaga kala hadal in wax la wada wadaago. Maxaan saaxiibada la wadaaga marka aan dugsiga joogo? (Buug, boombolo, sheeko.) Waxa aan la wadaagi karin iyo sababta? (Shanlada, bikeeriga wax lagu cabayo, dhuunyaraha cabiitaanka lagu dhuuqo, forgeetada.) llmahaaga weydiiso waxa ay yihiin sababaha wax lagu ogolaanayo ama lagu diidayo.
Wakhti la qaado ilmahaaga adiga oo la hadla iyo dhegeysta. Ilmahaaga u sheeg waxa agtaaga ka dhacaya. U sheeg sabaha ay wax u dhacaan, dareemka, iyo fikradaha. Marka u wax kuu sheegayo, dhegayso oo su’aalo weydiiso.
Ilmahaaga ka caawi in ay bartaan sida ay gacmeheeda iyo wajigeeda ay u dhaqato iyo sida loo isticmaalo suuliga. Marka ay bilaabayaan dugsiga barbaarinta, caruurta waa in ay yaqaanaan sida suuliga loo isticmaalo, in ay gacmohooda dhaqdaan, guluusyada, jiinyeerka iyo suunka dharkooda ay xirtaan.